Fisokafan’ny taom-pilalaovana atletisma: havondrona ireo hiatrika ny “Jeux des Iles 2019” | NewsMada
Fisokafan’ny taom-pilalaovana atletisma: havondrona ireo hiatrika ny “Jeux des Iles 2019”
Nivoaka ny faran’ny herinandro teo, ny fandaharam-potoana avy eo anivon’ny federasiona malagasy ny taranja atletisma, ho amin’ny taom-pilalaovana 2019. Araka ny tapaka, ny volana desambra izao no hanombohana izany.
Hisantarana ny taom-pilalaovana 2019 ny fampivondronana ireo mpilalao voafidy hiatrika ny lalaon’ny Nosy ny ranomasimbe Indiana 2019. Ity fampivondronana ity izay hataon’ny eo anivon’ny FMA ho isan’ny zava-dehibe amin’ity taona ity. Raha ny fantatra, ny 19 sy 20 Jolay izao no hanatontosana ity JIOI 2019 ity any Maurice.
Ankoatra izay, fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara miisa 4 no karakarain’ny federasiona. Anisan’izany ny “Cross Country”, hotanterahina any Fianarantsoa ny 16 febroary. Eo ihany koa ny “Trail” amin’ny halavirana 65 kilometatra, hatao ny 5 mey 2019. Toy ny fanao isan-taona, ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, sokajy “jeunes” ny 17 hatramin’ny 19 mey sy ny sokajy “Open” ny 24 hatramin’ny 26 mey, no hamaranana ny fifaninanam-pirenena. Ireo lalao roa ireo izay samy hatao ao amin’ny kianjan’Alarobia avokoa.
Hampiavaka ity taom-pilalaovana manaraka ity ny fisokafan’i Madagasikara bebe kokoa amin’ny lalao iraisam-pirenena. Maro tokoa ny fifaninanana any ivelany handraisan’ny atleta malagasy anjara. Anisan’izany, ohatra, ny “African Championships” ho an’ny sokajy 18 sy 20 taona izay hatao ny 13 hatramin’ny 20 Aprily any Abidjan. Manarak’izany ny fiadiana ny tompondakan’Afrika, sokajy “Seniors” ny volana mey 2019. Fa ny tena goavana dia ny “Jeux des îles de l’Océan Indien any Maurice ny 19 hatramin’ny 28 jolay izao ary ny “Word Championships, ny 28 septambra hatramin’ny 6 oktobra 2019. Ireto lalao ireto izay hanomanan-tena fatratra mba hahazoana vokatra tsara. Ho an’ny JIOI manokana, fampivondronana miisa 3 no vinavinaina ho atao amin’ity taona ity, ny volana desambra, ny volana aprily ary ny volana jolay, taona 2019.
Hofaranana amin’ny “Marathon International de Madagascar”, ny volana oktobra ny taom-pilalaovana 2019, amin’ny taranja atletisma.